Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa
Zvipinze Mugwara RaMwari
China, 5 Nyamavhuvhu 2021
*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa ndima * 151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze
"Uye zvinhu zvose izvi. Zvitsva. Zvakabva kuna Mwari. Ivo vakashandisa Jesu Muponesi kutidzosa kwavari. Vakatipavo basa rekudzosa vanhu kwavari" (2 Vakorinde 5 ndima 18).
Kune vamwe vanhu. Vanhu ava vanongotsvaka zvinovafadza ivo. Havatsvaki zvinodiwa naMwari. Asi chii chinodiwa naMwari? Mwari vanotsvaka kuti vanhu vazive chokwadi. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna 1 Timoti 2 ndima 4. Ichi ndicho chinofaniravo kuva chishuvo chako. Unofanira kushuva zvinoshuviwa naMwari.
Pane shungu dzaunofanira kuva nadzo. Idzi ishungu dzekuunza vanhu kuna Mwari. Ndidzo dzinofanira kukutuma kuita zvinhu. Ungava mutungamiriri wevanhu. Ungava mudzidzisi. Ungava unoshanda kubhanga. Ungava mudzidzi. Asi rangarira kuti uri Mukristu. Chikristu chako ndicho chakakosha. Chakakosha kudarika mamwe mabasa ako ose. Saka une basa rawakapiwa. Iri ibasa rekusvitsa ruponeso kuvanhu. Ita basa iri. Ndiro rinofanira kunge riri pamoyo pako. Tsvaka kuti vakawanda vapinde muhumambo hwaMwari. Ndiko kuti ugofara muhupenyu. Ndiko kuti hupenyu hwako hukugutse. Ndiko kuti uwane maropafadzo ose aungada.
Unofanira kuunza vanhu kuna Mwari. Iri rinotova basa. Ibasa raunofanira kuraramira. Ndiko kuti hukama hwako naMwari hudzame. Ndiko kuti unatse kunzwisisa Mwari. Ndiko kuti hupenyu hwako hukugutse. Jesu vane mashoko avakataura. Tinoaverenga muna Mariko 16 ndima 15. Vakati, "Endai munyika dzose. Muparidze ruponeso. Ruparidzei kuzvisikwa zvose". Tinoverenga mamwe acho muna Matiyo 24 ndima 14. Vakati, "Shoko iri reruponeso. Iro rinotaura nezvehushe hwaMwari. Richaparidzwa munyika dzose. Richaparidzwa seuchapupu kumarudzi ose. Ndipo pachazoguma nyika ino".
Shoko reruponeso rinofanira kusvika kunyika dzose. Izvi ndizvo zvakarairwa naJesu. Havana kungozviraira kuvafudzi. Havana kungozviraira kuvaparidzi. Vakazviraira kuVakristu vose. Saka iwe unotova mushumiri. Ndiwe unosvitsa Sungano Itsva kuvanhu. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna 2 Vakorinde 3 ndima 6. Ndiwe unozivisa vanhu nezveruponeso. Kune vanhu vari murima. Iwe wakatumwa kuvanhu ava. Wakatumwa kuti uvaunzire chiedza cheruponeso.
Nyika ino ine rima. Asi iwe uri chiedza. Ndiwe chiedza munyika ino. Saka shoko reruponeso ngarivonekwe pauri. Ngarivonekwe richipenya. Utaridze chiedza charo kuvanhu. Uchiita kuti naivo variendesevo kune vamwe. Mwari vanotovimba newe. Ndiwe wavari kuvimba naye panguva ino. Ndiwe wavakabatisa shoko ravo. Shoko iri ishoko rinoraramisa vanhu. Rinovhura meso evakarasika. Rinovabvisa murima. Richivapinza muchiedza. Rinovabvisa musimba raSatani. Richivaunza kuna Mwari.
Baba vandinoda. Ndinokutendai nekuda kwenyasha dzenyu. Nyasha idzi dzinoponesa. Dziri kushanda ikozvino. Dziri kushanda nokuti ruponeso ruri kuparidzwa pasi rose. Ruri kuparidzwa nevana venyu. Saka vakawanda vari kubviswa murima. Vari kupinzwa muchiedza. Vari kubviswa pasimba raSatani. Vari kuunzwa kuna Mwari. Izvi zviri kuitika pavari kugamuchira ruponeso. Muzita raJesu. Ameni.
Mabasa Avapostora 26:16-18
Habakkuk 2 ndima 14